DF oo ka jaawaabtay hadal ka soo yeeray Mucaaradka | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo ka jaawaabtay hadal ka soo yeeray Mucaaradka
Dowladda Fadaraalka aya sheegatay in aan magaalada Muqdidho lagu qaban karin bannaan-bax aysan iyadu sugeyn amaankiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirka Amniga Xundubeey oo warbaahinta la hadlay, kana jawaabayay hadalkii ka soo yeeray Golaha Midowga Musharixiinta ee ahaa in ay bannaan-baxa soo socda ay aminigooda sugan doonaan, ayaa sheegay in aan Mudaharaad aysan DF aminigiisa sugeyn uusan ka dhici doonin Caasimadda.
“Mudaharaan amnigiisa aannan sugeyn, oo dadka qabanaya ay leeyihiin innaga ayaa amniga la wareegeyna ma aqbali karno”, ayuu yiri Wasiirka Amniga Soomaaliya.
Wasiir Xundubeey, wuxuu carabka ku dhuftay in DF aysan ka soo hor jeedin in bannan-bax la qabto, hayeeshee aysan qasab tahay in ay iyadu amaanka ilaaliso.
Golaha Midowga Musharixiinta oo dhawaan warbaahinta la hadlay ayaa dhankooda sheegay in Dowladdu ay ka baxday ballantii ay qaaday ee ahayd in ay sugeyso amniga Mudahaardka, sidaas owgeedna uu baaqday dibad-baxa.
Guud ahaan waddooyinka gala Taallada Daljirka dahsoon ayaa maanta la xiray, halka guud ahaan xarumihii ay shalay ku dhawaaqeen Mucaaradka ee loo qorsheeyay in ay bannaan-baxayaashu socodkoodu ka soo billaabaan la geeyo ciidamo fara badan.
Baaqashada dibad-baxa iyo hadalada kulul ee hawada la isku marsiiyay ayaa yimid kadib markii uu fashil ku soo dhamaaday kulankii xalay dhex maray Sii-haya xilka Ra’iisul Wasaaraha iyo Mucaaradka.